Ndị na-ewepụta ihe na Australia: Ọkpụkpụ na-agba agba - Reeddịrị
Cheedị ụdị dike abụọ kachasị amasị gị. Ugbu a were ya na ha jikọtara ike ha ịmepụta nke a kacha dike.
Nke ahụ mara mma nke ukwuu ihe mere na Onye Ọstrịa Australia , makwaara aha dị iche iche, gụnyere Nwa Aussia , Onye Ọla Ọstrelia Ọlaedo , Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia , na Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia .
Zute Golden Onye na-azụ ihe & Australian Shepherd mix
Ngwurugwu a na-acha odo odo bụ ọgụgụ isi siri ike nke ga-edebe gị na mkpịsị ụkwụ gị n'ụzọ niile kachasị mma. Nọgide na-agụ iji chọpụta ihe ndị ọzọ!
Mmalite nke Australian Retriever
Kedu ihe Golden Aussie dị?
Kedu ihe ị ga-atụ anya n'aka mmụọ Aussie Retriever?
Inwe Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia
Ndị Ọzụzụ Atụrụ Ọchịchị Australia ọ nwere nsogbu ahụike?
Chọ onye Ọzụzụ Atụrụ Ọstrelia Retriever nwa nkịta maka ọrịre
Bụ precocious Australian Retriever gị zuru okè Pita?
Ekwenyere na onye na-azụlite ihe na Australia bụ ọrụ maka ịmepụta nkịta a. Dabere na tiori, onye na-azụ ya gafere onye ojii Ọzụzụ Atụrụ Australia ya na ndị Golden Retrievers na 2007 na 2008.
Kemgbe ahụ, òtù ndị a amatawo crossbreed: American Canine ngwakọ Club (ACHC), Okike Dog Kennel Club (DDKC), Nkịta Nkịta nke America (DRA), na Ndepụta Canine International Designer (IDCR).
Ugbu a, ka anyị gafere na nkịta ndị bidoro ụdị ngwakọta mara mma.
Ndị Ọzụzụ Atụrụ Australia: Ike ụlọ
Zute Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia
N'agbanyeghị mpaghara na aha ha, oge a Ndị Ọzụzụ Atụrụ Australia abịaghị site na Land Down Under.
Ndị nna nna ha n'oge na-adịbeghị anya malitere na Basque Country na Europe, mana ụdị ahụ nụchara anụcha ma mee ka ewu ewu na US.
Buru ìgwè ehi, Uchechukwu dị na-arụ ọrụ nkịta na isi .
Mara maka ha ụkpụrụ omume na ọgụgụ isi , Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia bụ shoo-maka ụdị ọrụ canine niile, site na nyocha na nnapụta na ọgwụgwọ.
Golden Retrievers, otu n’ime ụdị ndị America kacha hụ n’anya
Ezubere iji weghachite mmiri mmiri, Ntughari ọla edo (ma ọ bụ Goldens maka nkenke) bụ ụdị ọzọ raara onwe ya nye.
Anyị nwere ike ịkele Dudley Marjoribanks nke Scotland maka inye anyị Golden Retriever na etiti afọ 1800.
Site na mkpofu nke agbapụta oji, otu nwa nkita na-acha odo odo pụtara. Marjoribanks gafere nwa amị na-anwụ anwụ ugbu a Tweed Mmiri Spaniel . Offspringmụ ha nyefere Golden Retriever nke oge a.
Kemgbe ọtụtụ afọ, Golden Retrievers ghọrọ ahụrụ n'anya ezinụlọ . Ha na-agbanwe agbanwe na n'elu 5 nke AKC “Mostdị Kasị ewu ewu” ndepụta .
Otu n'ime ihe ndị kachasị mma banyere obe obe nke onye ọzụzụ atụrụ nke Australian-Golden Retriever bụ na enweghị nkịta abụọ yiri. Nwere ike ịzụta ụmụ nkịta si n'otu ụlọ, ma nke ọ bụla nwere ike ịkwụsị na ọhụụ pụrụ iche.
Aussie Retrievers na-enwekarị egwuregwu, nke dabara adaba na osisi na-enyefe onwe ha n'ọrụ na mmega ahụ.
Na anya na-ekpo ọkụ nke nwere ike ịbụ ndo nke acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ aja aja , gị Australian Retriever mix ga-abụrịrị ihe ịtụnanya. Ntị ha na-ada ada n'akụkụ abụọ nke isi ha sara mbara, na gburugburu imi, imi ojii bụ ilu cherry a na-atụ n'elu.
Aussie Retrievers mmiri-na-agbapụta uwe abụọ nwere ike ịbụ nchikota nke ọcha, nwa, aja aja, brindle, keisi ocha, ma ọ bụ ọlaedo na agba. Ha nwekwara ike inwe njirimara ahụ acha ọbara ọbara ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ nke Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia.
Ajị ha nwere ike ịbụ nke ọkara ma ọ bụ ogologo, ntakịrị mmiri ma ọ bụ ogologo, mana ọ na-enwekarị ụdị adịghị mma.
Gị Golden Australian Ọzụzụ Atụrụ ga-dịcha ejedebe na ogologo, N'ụbọchị nke abụọ, N'ụbọchị nke abụọ nke Golden Retriever. Ma, ọ bụghị mgbe niile ka ikpe ahụ dị.
Purefọdụ Aussies dị ọcha na-ebu ọdụ. Dabere na ndị mụrụ gị pup, ha nwere ike ịnwe ọdụ zuru ezu, ma ọ bụ ọ nwere ike ịdị mkpụmkpụ nke na ọ dị ka ha enweghị otu ma ọlị.
Kedu otu ibu onye Australia nwetaghachiri tozuru oke?
Dabere na usoro nne na nna nke nne na nna ha, Aussie Golden gị kwesịrị iru nha ha n'etiti Ọnwa iri na abụọ ruo ọnwa iri na isii . Ndị toro eto ga-adịkarị n'etiti 30 ruo 60 pound (14 ruo 27 n'arọ) ma guzoro 19 ruo 23 sentimita asatọ (48 ka 58 cm) ogologo.
Na-ahọrọ ihe dị nso n'apata ụkwụ? Obere Golden Aussie ga - ekwe omume ma ọ bụrụ na nne ma ọ bụ nna nwere nne na nna Miniature Onye Ọzụzụ Atụrụ America na Miniature Golden Retriever .
Ọ bụ ezie na ọdịiche nke Australian Retriever bụ nke kachasị oke, ụdị a bụ ebughi maka ulo obibi . Site na mmụọ ha na-aga agha, canines ndị a na-eme nke ọma n'ụlọ na nnukwu ogige ndị a gbara ogige.
Fido a bụ magburu onwe Pita n'ihi na-arụsi ọrụ ike ezinụlọ . Ha na ụmụaka nke afọ niile na-emekọrịta ihe, ha na onye ọ bụla nọ na ngwugwu ha na-enwe mmekọrịta chiri anya.
Were oge nke abụọ kirie vidio a nke puppy fluley merle na-ekpori ndụ n'oge ụmụ nwoke na ụmụ mmadụ:
N'ezie, Australian Retrievers hụrụ ezinụlọ ha n'anya nke ukwuu na ha ga-ahọrọ ịnọnyere ha 24/7.
Ha nwere ike ịnabata ịnọ naanị ha obere oge, mana ha choro mmekorita na mkpali . Na-enweghị ndị a, ndị ọzụzụ atụrụ Ọstrịa nke Ọstrịa nwere ike gbanwee omume na-ebibi ihe iji nagide erughị ala na nchegbu nkewa. N'ihi ya, a ngwakọ ekwesịghị ibi ma ọ bụ ihi ụra n’èzí .
Iji mee ka ite ahụ dị ụtọ, Golden Aussies bụ enyi na enyi doggos , ọbụna na ndị bịara abịa. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ ịnabata ma na-atụrụ ndụ, ị gaghị echegbu onwe gị gbasara onye ọzụzụ atụrụ Australian-Shepherd-Golden Retriever na-anwa ịtụ ndị ọbịa ụjọ.
Dị ka enyi na enyi ka ha nwere ike ịbụ, Aussie Shepherd Retrievers nwere ike inwe ókèala ala . Ha nwere ike na-echebe nke ha mmasị mmadụ, ma ọ bụ na ha nwere ike hog n'anya hụrụ n'anya ihe n'ụlọ.
Lelee ụmụaka na anụ ụlọ ndị ọzọ anya ma ọ bụrụ na ụmụaka na-egwuri egwu na-etinye aka n'oge egwuregwu. Golden Aussie gị nwere ike ikpebi na ike gwụrụ ha ịkekọrịta, ị ga-achọ ịnọ nso iji jide n'aka na onye ọ bụla na-egwuri egwu nke ọma.
Aussie weghachite nwere àgwà nchedo , kwa. Ọ bụ ezie na ha anaghị agbasi ike n'ozuzu ha, ha dị njikere karịa iji chebe gị pụọ n'ihe egwu nwere ike ịme ma ọ bụ ọ bụrụ na enwere ihe na-adịghị mma.
Akụkụ Aussia na-eme ha adept ọzụzụ atụrụ , ya mere umuaka na nwamba kpachara anya! Dabere n'otú mkpụrụ ndụ ihe nketa ndị ahụ si azụ siri ike, ị nwere ike ịhụ ndị otu obere ngwugwu gị ka a na-achịkọta oge ụfọdụ.
Toghara ichegbu onwe gị n'ihi na ebumpụta mmụọ ndị a ga-eji nwayọ nwayọ belata ka nkịta gị na-eto. I nwekwara ike ime ihe iji kụziere nwa gị na ụmụ gị ihe ha ga-eme ma ọ bụrụ na omume a na-eto.
Otu ihe na-agaghị anwu anwu bụ Aussie Golden’s gị mmụọ rambunctious . Ha ịhụnanya igwu egwu, iweta ma bie ndu na agbahapụ. Nwa gị nwere ike ito ogologo, mana ha ga-eme ya mgbe etopụta ha nkịta-dị ka ọ joyụ .
Zute Loki, Onye Nlekọta Ihe Nleta Ọchịchị-Onye Ọzụzụ Atụrụ Australia - Isi ihe onyonyo
Ọ dabara nke ọma, ịzụ ìgwè a bụ ịgagharị na ogige nkịta.
Aussies na Goldens bụ abụọ n'ime ọgụgụ isi ọgụgụ isi nke ụwa canine, yabụ onye na - eweghachi ihe nkiri Australia gị nwere nnukwu nkwa iji bụrụ ngwa mmụta . Trainingzụ ọzụzụ na-atọ ha ụtọ, nke a ga-emekwa ka ị kwụsị omume ọjọọ site na mmalite.
Ozugbo nwa gị na-alọta n'ụlọ , malite isetịpụ atụmanya. Chọrọ igbochi ọzụzụ atụrụ ma ọ bụ njirimara mpaghara adịghị mma tupu ọ bido.
Ozugbo agwakọtarala onye ọzụzụ atụrụ Ọzụzụ Atụrụ Australia-Golden Retriever n'ụzọ zuru ezu, bido were ha ka ha rube isi na klaasị na egwuregwu ụmụaka.
Ijikọta mmekọrịta mmadụ na ọzụzụ maka omume ha niile ga-akụziri ha otu esi n'ụzọ kwesịrị ekwesị soro ndị nkịta na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe . Ọ na - egbochi ha ịnwebiga oke ihe ike nke ha onye ọkacha mmasị. Ọzọkwa, ọ ga-enyere aka mee ka ebe gị sie ike dịka onye ndu na-enweghị atụ .
Ha agaghi aka nka maka usoro ohuru. Na mgbakwunye, echiche uche na-aga n'ihu dị oke egwu ka obi uto a nwee obi uto. Jiri ọzụzụ dị ka oge iji kpakọrịta nkịta gị ma zụlite mkpa ya.
Obi dị m ụtọ, ilekọta Australian Shepherd-Golden Retriever mix dị ezigbo mma, kwa. Nọgide na-agụ iji hụ ihe ị ga - eme iji mee ka pooch nwee obi ụtọ na ahụike!
Na-alụ nwanyị ọhụrụ: Ndi Australian Retrievers wụsịrị?
Eeh. Na dị ka agafeghị oke na nnukwu shedders , ịchachasị ugboro abụọ n'izu na-ezukarị. You nwere ike ihicha ha oge niile iji belata ịwụfu. Mana ikwesighi igbacha nkita a.
Cheta na uwe abụọ ahụ anyị kwuru na mbụ, nri? Nkeji nke abụọ nke ntutu na-echebe nkịta Golden Aussie gị site na mmiri ozuzo ma na-enyere ya aka ịhazi ahụ ọkụ ya.
Shakpụ ntutu na-ebelata ikike uwe ahụ nwere ịrụ ọrụ ya ma nwee ike ịkpata nkasi obi na mmerụ ahụ na nkịta gị.
Ezigbo Onye Ọzụzụ Atụrụ Ọzụzụ Ọchịchị Australia - Isi ihe onyonyo
Idebe uwe elu abụọ ahụ n'elu ọnọdụ ga-ahụ na Golden Aussie ga-eme adịkarịghị mkpa ịsa ahụ .
Anyị maara na ọ na-ada ụda na-adịghị mma, mana chekwaa baths zuru oke mgbe ọ dị mkpa. Nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma iji chekwaa mmanụ sitere na ajị anụ ha.
Ọ bụrụ na ị na-atụbuworị n'echiche nke ntutu nkịta ruru unyi, ewela iwe. Mgbe nwa bekee gị na-ebute n’èzí, jiri a ahịhịa ma ọ bụ mgbochi mmiri iji mee ka ha dị ọcha. Ọ bụrụ na ha dị ọcha nke ukwuu na ikike ihu igwe, kpochapụ ha n'èzí. Naanị iji shampoo!
Ihe ndị ọzọ usoro ihe ịma mma mara mma nke Australian Golden Retriever bụ obere oge . Otu ugboro n'ụbọchị ma ọ bụ karịa, ị ga-achọ ịlele ihe ndị ahụ mara mma ntị maka ihe ịrịba ama nke pests ma ọ bụ irighiri ihe.
Echefula ihicha eze ya kwa ụbọchị na ewepụtụ mbọ ya kwa izu ọ bụla.
Kedu nri nkịta kachasị mma maka Ariwọ Nta Ọgwụ?
Nri na-edozi ahụ dịgasị iche iche site na nkịta na nkịta. Osisi ndị na-arụsi ọrụ ike na-eme ihe kachasị mma na nri elu na protein , na nke a crossbreed abụghịkwa ihe ọzọ. Họrọ a elu-edu akọrọ kibble emepụtara maka ọkara- ka nnukwu-fidos ndị siri ike. O kwesịkwara ịdị mma maka afọ ndụ anụ ụlọ gị, ịdị arọ ya, na mkpa ahụike.
Ihe dị ka iko abụọ ruo atọ kwa ụbọchị ga - eme ka pooch gị na - enwu, wee kewaa ụtụtụ na nri abalị. Zere inyefere nri na nri anaghị akwụ ụgwọ iji belata ihe ize ndụ nke uwe elu na uru adịghị mma.
Na-eme Golden Aussie gị
Mma fanatics, nke a nwere ike ịbụ nkịta maka gị. Golden Aussie Ndị ọzụzụ atụrụ bụ dị ike na mkpa ọ dịkarịa ala, mmega ahụ 60 nkeji .
Anyị kwesịrị ka o doo anya na ụdị mmega ahụ bụ nke anaghị akwụ ụgwọ .
Amaghị na ọ bụrụ na ị kwadebere maka kaadi cardio na-anaghị akwụsị akwụsị kwa ụbọchị? Echiche na-ezighi ezi bụ na ọrụ a kwesịrị ime otu oge. Ọ bụ mma-agbasa mgbatị gị doggo na ụbọchị niile. Tụkwasị anyị obi, nkwonkwo na akwara Fido ga-ekele gị maka ya.
N'akụkụ ndị ahụ, usoro mmega ahụ nke pup gị kwesịrị ịgụnye karịa ịga ije ma ọ bụ na-agafe n'ogige ahụ.
Omume anụ ahụ dị egwu, mana ndị Australia weghachitere na-agbapụta okooko osisi mgbe egboro mkpa uche ha. Iji mee ka ụbụrụ ha nwee obi ụtọ, gwakọta ịgagharị ogologo oge na egwuregwu na ọzụzụ.
Na-eche free ose ihe . Ha bụ adịghị eche ihu igwe ọkụ ma ọ bụ oyi , ma obu. Kedu ihe nke ahụ pụtara gị? Ọtụtụ nhọrọ!
Ha na-enwe mmasị ịgba ọsọ n'enweghị oghere, na-achụgharị ebili mmiri n'akụkụ osimiri, ọbụna na-aga ije! Ọ dịghị ugwu dị oke ogologo, ọ bụrụ na ị jụọ canines ndị a.
Oge mmega anaghị etinye aka njem oge niile, agbanyeghị. Kpatụ Golden Aussie Shepherd’s retriever side, ma mee ka ike gwụ ha site na egwuregwu egwuregwu kpochapụwo. Naanị jide n'aka na ị nọ n'ime ebe a gbachiri agbachi tupu ịhapụ ha ka ha gwuo egwu.
Ozugbo Australian Retriever jidere isi, ha ga-agbụ ma kpebisie ike ịgbaso ya. Na-eme omume ncheta ha oge niile, ma lelee anya inweta ogologo ndu ya mere ha nwere ike gbatịa ụkwụ ha n’ejighi njem nke ha.
Dị ka ụdị anumanu niile, Aussie Golden Retrievers nwere ike ịnwe ọnọdụ ahụike ụfọdụ.
Ọ bụ akụkụ nke nwe nkịta na ọ dịghị onye n'ime anyị na-enwe mmasị iche echiche. Mana ka ị na - amata ihe gbasara nkịta gị nwere nsogbu, ọ ga - adị mfe karịa ịchọpụta nsogbu ahụike nwere ike.
Na Golden Aussies, ịchọrọ ile anya maka ihe ịrịba ama nke nsogbu anya , dị ka cataracts na colobomas . E nwekwara underactive thyroid, allergies, uwe elu, na hip dysplasia .
Onye Australia na - eweghachiri ihe ọ bụla nwere ike keta oke ụdị nsogbu ahụike dị iche iche. Golden Retrievers bụ ihe nwute dị egwu maka ịrịa ọrịa kansa, ebe Mmetụta dị iche iche bụ ihe a na-ahụkarị n’Ọzụzụ Atụrụ Australia.
Ọ dabara nke ọma, n'agbanyeghị ụfọdụ nsogbu ahụike, Aussie Goldens na-adị ogologo ndụ. Site na nleta ndị vet na nlekọta kwesịrị ekwesị, Australian Retrievers na-enwe ndụ ndụ 12 ruo 15 afọ .
Australian Shepherd Retriever nwa nkita - Isi ihe onyonyo
Australian Retrievers dịtụ ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere ụdị ụdị ndị ọzọ. Ahịa maka nkịta ndị a sitere $ 300 ka $ 900 .
Ebe ọ bụ na ngwakọ a ka dị ọhụrụ ma dị obere, ịchọta onye na-azụ ihe ma ọ bụ ụlọ mkpo nke na-eme ka Australian Shepherd-Golden Retriever mixes siri ike.
Nke ahụ apụtaghị na ọ gaghị ekwe omume.
Ndị na-azụ ihe & kennels nke Australian Golden Retriever
Ọ bụrụ na ịmeela nyocha gị ma nwee obi ike na ị nwere ike ijikwa obe a, anyị hụrụ ụfọdụ weebụsaịtị na Golden Aussies maka ọrịre ma ọ bụ nnabata.
Ha nwekwara ndị obe Ọzụzụ Atụrụ Ọstrelia ndị ọzọ na ngwakọta Golden Retriever nwere ike ịmasị gị. Ndị a bụ ụfọdụ ebe ịlele:
Ndị Ọzụzụ Atụrụ Australia Furever (Rancho Cucamonga, CA)
Nnapụta Ọzụzụ Atụrụ Western Western (Sheridan, WY)
Delaware Valley Golden Retriever Nnapụta (Reinholds, PA)
Anyị chọpụtakwara a Ibe Facebook raara nye Australian Retrievers, anyị chere na ọ bara uru ile anya.
Izute Daisy, Aussie Golden mix nwa nkita - Isi ihe onyonyo
Ma ma a zụrụ gị na ụdị a, ị ga-ekweta na Aussie Goldens nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye.
Ha hụ ezinụlọ ha n'anya , ha hụrụ igwu egwu, na-enwekwa mmasị n'ịmụ ihe. Ha na-enwekwa obi ụtọ na mgbatị na choro ndi nwere oru nwee ọtụtụ ume.
Ì chere na ị nwere ike ịnagide na Australian Retriever? Ka anyị mara na ihe!
Onye Ọzụzụ Atụrụ Black German - Nduzi Nzuzo kachasị elu
Ntuziaka miri emi na German Shepherd Rottweiler Mix
nwa nkịta na -achụ nta nkịta russian
lee ka nnukwu ndị obere huskies na -esi enweta
ndịiche dị n'etiti malinois vs German onye ọzụzụ atụrụ
ego ole ka alaskan klee kai dị
poodle shih tzu mix ọnụ